Firy ny comebacks sisa tavela amin'i Bill Goldberg? - Wwe
Firy ny comebacks sisa tavela amin'i Bill Goldberg?
Amin'ny SummerSlam, Bill Goldberg dia hiverina miverina any WWE indray hiatrika an'i Bobby Lashley hiatrika ny amboara mavesatra an'izao tontolo izao, fa firy kosa ny tafaverina?
Goldberg, ilay lehilahy izay nilomano mafy tany WCW tamin'ny faramparan'ny taona 90, dia nanana asa hafahafa tamin'ny WWE. Ny fihazakazahany voalohany dia noheverina ho bitika kely, saingy ny fiverenany taty aoriana folo taona taty aoriana mba hifandrafy amin'i Brock Lesnar dia zoro goavambe tamin'izany fotoana izany.
Hatramin'ny 2016, Goldberg dia nandao ary niverina imbetsaka, vonona hatrany amin'ny lalao lehibe. Isaky ny mijery kely antitra kokoa izy, somary manatsemboka kely ary somary volondavenona eo amin'ny volombavany.
Mety ho ny hiranan'i Goldberg miaraka amin'ny WWE i SummerSlam?
Bill Goldberg dia nitifitra angatra tamin'ny Tompondakan'i WWE, Bobby Lashley, mba hanakatonana ny manta anio alina https://t.co/Az3Kem47Fy
- WrestlingNewsSource.com (@WNSource) 17 aogositra 2021
Nilaza i Goldberg fa niverina nanao tolona pro izy mba hahafahan'ny zanany lahy, Gage , nahita azy nanao fampisehoana. Ankehitriny 15, Gage koa dia nasongadina tamin'ny fandaharana WWE, niaraka tamin'ny rainy, noho izany dia afaka nizara fotoana manokana ho an'ny fianakaviana izy ireo noho ny lalao nitolona.
Rehefa nilaza izany izy, dia hiverina 55 ihany koa i Goldberg amin'ity taona ity ary niatrika ratra marobe nandritra ny asany. Nahazo dolara an-tapitrisany izy na teo amin'ny peratra na tamin'ny fialamboly. Vitany daholo izany, lasa lasa angano ary tsy misy manaporofo intsony.
Ka? Misy dikany ve ny hiverenany?
Raha ny fahitany azy dia mora ny 'eny' ny valiny. Isaky ny afaka miasa amin'ny fotoana fohy hahazoana vola be ianao, dia misy dikany. Rehefa dinihina tokoa, tsy misy tsy mahazaka vola.
Na izany aza, miharihary hatrany fa tsy ilay zavatra mahasarika azy tamin'ny fiverenany voalohany tamin'ny taona 2016. Ny fijanonany sy ny fanombohany dia tena nesorina tamin'ny lovany teo imason'ny mpankafy.
Ary tsy toa an'i Bill Goldberg efa fantatra fa nanao lalao kintana dimy izy io. Tsy izany no antenaintsika aminy. Ny mahasarika azy dia ny maha-mahatalanjona ny fanatrehany. Mampalahelo fa hanjavona izany fahatahorana izany rehefa manomboka mandray ny WWE toy ny fomba fanaingoana ianao, mandalo azy io hatrany hatrany.
Tena mila fitondrana anaram-boninahitra Goldberg hafa ve isika?
@KevZCastle @ apter1wrestling @ jimmyv3
Ny lahatsoratra farany navoakako tao amin'ny sportskeeda dia miresaka momba ny antony tsy misy antony anambanan'i Bobby Lashley ny fehikibo amin'i Bill Goldberg ao amin'ny SummerSlam amin'ity faran'ny herinandro ity ... https://t.co/mXMCUtxTmh
- RyanKBoman (@RyanKBoman) 20 aogositra 2021
Na dia azo atao foana aza ny handresen'ny Goldberg an'i Lashley amin'ny SummerSlam, fantatry ny mpanatrika fa hazakazaka fohy ihany izany. Tsy mbola fantatra loatra ny mijanona mandritra ny fotoana lava be izy, izao nahatratra ny antonony tamin'ny fomba ofisialy. Ka tsy misy antony tokony hitahianany volamena indray.
Ao anatin'ny tontolo lavorary, Lashley sy Goldberg dia hanana lalao fohy ao amin'ny SummerSlam amin'ny Sabotsy. Goldberg dia hiditra amin'ny fidirana goavambe, hanao hadisoana kely ary ho resy amin'ilay Mahery Indrindra.
Aorian'izay? Heverin'ny tsirairay hoe rahoviana i Bill Goldberg no hiverina amin'ny peratra WWE - raha sanatria. Tanteraka ny fanolorany tena ho an'ny fampiroboroboana sy ny fampanantenany tamin'ny zanany lahy. Nahazo anaram-boninahitra ambony izy tamin'ny orinasa lehibe rehetra niasany. Ary azo antoka fa tsy ho tanora kokoa izy.
Ka ho an'i Bill Goldberg ... aorian'ny SummerSlam, mety tsy ny fanontaniana hoe: 'Iza no manaraka?'. Mety hitovy kokoa amin'ny hoe: 'Inona ny manaraka?'
Heverinao ve fa handresy an'i Goldberg i Bobby Lashley ary hivoaka ny SummerSlam ho Tompondakan'i WWE? Lazao anay eto ambany!
ahoana ny matoky ny mpandainga indray
ny fomba hitsaharana tsy dia tsara loatra amin'ny fiarahana
ny fomba hahatonga ny sakaizany kokoa ny fitiavana
Ahoana no hahazoana ny fiainanao indray lalana
Tokony hanome azy fotoana faharoa ve aho
ny fomba fijanonana tsy hiasa amin'ny hafa